Thursday April 30, 2015 - 13:08:05 in Maqaallo by Super Admin
Haddaba waddanka intaas leeg ayaa waxaa soo maray maamulka dawladnimo saddex dawladood, isla markaana waa waddan ku nabad iyo caano maalay nabad iyo xoriyeyd ay dadku gacamahooda ku dhisteen,misana waxqabadkii dawladu intiisa badan la is odhan karo waa mid meesha ka maqan.
Isbedelka wakhtiyada oo ah kuwo samayn ku keena dadka deegaamada xoolo dhaqatada iyo beeralayda ah, ayaa ah kuwo sanad walba qorsho la’aan ingu dhaafa oo aanay ka faaidaysan dawlada iyo dadka shacabka ah ee dalkani.
Waxay ahayd wakhti yar kahor ilaa imika in laga soo sheego gobol baddan oo dalka kamid ah in ay ka jirto abaar iyo biyo la’aani kuwaas oo dadkii iyo xoolihii ku noolaa ay Oon iyo biyo la’aan u bakhtiyayaan.
Waa Ilahay Galadii curashadan roobka iyo nimcadan inoo da’aday ee ka curatay dhulkeena, Laakiin waxaa mid lalayaabo ah misana Qorsho xumo ku ah dawlada in Maanta dooxyada dalka ay biyo maraan oo ay qadaan wixii u dhawaa xitaa Biriijyadii jabin gadhaan biyahaasi, isla markaana beri laga Oomanyahay oo aan wax qorshe ah laga yeelan biyahaas.
Maxay xukumadu hantidii iyo dakhlligii dalku lahaa ugu bixinaysaa meelo kale oo aan ku munaasib ahayn, Sida diwaan gelin cod bixiyeyaal taas oo sanad walba madaxweynaha xilka hayaa uu sameeyo, iyo qaadasho kaadhadh aqoonsi oo sida bulshadu aaminsantahay madaxweyne kasta oo xilka qabtaa oo beddelo kaadhadhkii madaxweynihii hore sameeyey, iyadood mooddo in uu ka barakaysanaayo ama faan uu moodayo, bedelka kaadhadkaas.
Haddaba intay dawladu dheeldheelka iyo kaftanka ka timaaddo bulshada wax ha u qabato, Ha u sheegto runta, isla markaana ha kadeyso ididiiladan ay ku hadaaqayso, hantida dalka laga helana bulshada dib haloogu celiyo.